सृष्टिलाई सुकेधारा चोकमा यसरी हानेको थियो बसले, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ? (भिडियो) – " कञ्चनजंगा News "
सृष्टिलाई सुकेधारा चोकमा यसरी हानेको थियो बसले, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ? (भिडियो)
No Comments on सृष्टिलाई सुकेधारा चोकमा यसरी हानेको थियो बसले, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ? (भिडियो)
काठमाडौं। सोमबार बिहान सुकेधारा चोकमा बसको ठ क्करबाट घा इते भएकी पशुपति क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राको मृ त्यु भएक्दो छ । पशुपति क्याम्पसमा बिबिएस चोथो वर्षमा अध्ययनरत गोरखा मिरकोटकी २१ वर्षिया सृष्टि पन्तको उपचारको क्रममा ओम अस्पतामा मृ त्यु भएको हो ।
आफ्नी साथीलाई बसले ठक्कर दिएर मा रेपछि आ क्रोशित विद्यार्थीले एक बसमाथि आगजनी गर्दै चाबहिल चोकमा प्रदर्शन गरे । सृष्टिलाई ठ क्कर दिने गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
‘बाटो काट्दै गर्दा ठ क्कर दिएको रैछ । पन्तले बाटो का टेको ठाउँमा जेब्रा क्रस भए/नभएको खुलेको छैन,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले भने ।
उनका अनुसार श व पो स्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लैजाने तयारी छ । पन्तलाई भक्तपुर-काठमाडौं रूटमा चल्ने बा ४ ख ५९२० नम्बरको बसले ठ क्कर दिएको खुलेको छ ।
सृष्टिको माइती गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ प्युघरवेशी हो । गत वर्षमात्र उनको विवाह भएको थियो । श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।सृष्टिका आमाबुवा बिहानै अबुँवाबाट गाडी चढेर काठमाडौं आइरहेका छन् । एक छिमेकीले दिएको जानकारीअनुसार सृष्टि घरकी कान्छी छोरी थिइन् । उनका एक दिदी र भाइ छन् ।
सृष्टिको नि धनपछि उनका साथी नारायण पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मलाई विश्वास नै लागेको छैन कि दिनहुँजसोसँगै सुकेधारादेखि पशुपति क्याम्पस आउने साथीको नि धन भयो भन्ने। हामीलाई गाडीको नजिक नहिँड भनेर सम्झाउने अत्यन्तै मिलनसार साथी । जे सुनें त्यो झूट सावित होस् ।’
सृष्टिलाई ठ क्कर दिने बसका चालकलाई कानुनअनुसार का रबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । यसैबीच घटनास्थलमा के भएको थियो भन्ने बिषयमा स्पष्टिकरण दिन पशुपति क्याम्पसका एक बिद्यार्थी नेता मिडियामा आएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो –
← अस्पताल पुगेपछि उनले आमालाई फोन लगाइदिन भनिन्, तर… → फिनल्याण्डका ‘युथ’ मन्त्रीहरुको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा